हाइड्रोपावरका लिडर चिलिमे र बुटवल पावरका शेयरधनीले ५ वर्षमा कति पाए लाभांश ? – Insurance Khabar
हाइड्रोपावरका लिडर चिलिमे र बुटवल पावरका शेयरधनीले ५ वर्षमा कति पाए लाभांश ?
प्रकाशित मिति : १५ असार २०७६, आईतवार १७:१६
नेपाल स्टक एक्स्चेञ्चमा सूचिकृत भएका ३० वटा हाइड्रोपावर कम्पनीहरुमध्ये अब्बल कम्पनीको रुपमा चिलिमे हाइड्रोपावर र बुटवल पावर कम्पनी रहेका छन् । नेप्सेमा सूचिकृत भएका ३० कम्पनीहरुमध्ये यी दुई कम्पनीले आफ्ना शेयरधनीहरुलाई प्रत्येक वर्ष आकर्षक लाभांश प्रदान गर्दै आएका छन् । अरु केही हाइड्रोपावर कम्पनीहरुले भने लगानीकर्ताहरुलाई निराश बनाउँदै आएका छन् ।
नेप्सेमा सूचिकत भएका ३० कम्पनीमध्ये अब्बल ठानिएका हाइड्रोपावर कम्पनीहरु चिलिमे हाइड्रोपावर र बुटवल पावर कम्पनीको पाँच वर्षको लाभांश हेर्दा :
चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनीका शेयरधनीहरुले यो ५ वर्षको अवधिमा आकर्षक लाभांश प्राप्त गरेका छन् । यो पाँच वर्षको अवधिमा लगानीकर्ताहरुले १ सय ३२ प्रतिशत लाभांश प्राप्त गरेका छन् । उक्त लाभांशमध्ये ८० प्रतिशत बोनश शेयर रहेको छ भने ५२ प्रतिशत नगद लाभांश रहेको छ ।
त्यस्तै बुटवल पावर कम्पनीले पाँच वर्षको अवधिम लगानीकर्ताहरुलाई १ सय १० प्रतिशत लाभांश प्रदान गरेको छ । उक्त १ सय १० प्रतिशत लाभांशमध्ये १७ प्रतिशत बोनश शेयर रहेको छ भने बाँकि ९३ प्रतिशत नगद लाभांश रहेको छ ।